Akụkọ - Nyocha ndị ahịa
Mgbe ogologo oge nke mmepe na ụlọ ọrụ kandụl, anyị Winby kandụl akwakọbawo ọtụtụ ndị ahịa ma nata otuto dị ukwuu site n'ọtụtụ mba. Ihe ndị a bụ ụfọdụ ndị ahịa na-amata ngwaahịa na ọrụ anyị.
Nke a dị egwu, m nwalere kandụl m yana ọ na-arụ ọrụ nke ọma, mana ọ dị mkpa ka awa 2-3 mee ka ọdọ mmiri gbazee n'ụzọ zuru oke. ma n'ozuzu m na-amasị ngwaahịa a. Enwere m olileanya na enwere nhọrọ ọ bụla, dị ka dayameta nke wick maka ite nwere diameters 7-8cm.
Wendy bụ m na kọntaktị a wee na ya ahịa ọrụ bụ magburu onwe! Ana m akwado ịkwado ụlọ ọrụ a.
M nyere iwu ite iko ojii, ha na foto ahụ bụ otu. Ọ ga-amasị m ịbufe ụgbọ mmiri ngwa ngwa mana ha rutere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe ndị na-ere ahịa kwuru na ha ga-enweta ma anata m ọtụtụ mbupu na nsuso ozi. Akpọkọtara ha nke ọma ma n'ime ite 300 nyere iwu ka ọ bụrụ naanị otu dara.
▶ M nnọọ obi ụtọ na àgwà na anya nke ngwaahịa a. Anọ m na-achọ ite nnọchi maka azụmahịa m kandụl m wee nweta usoro nke ite 14oz matte ojii na ọcha ndị nwere mkpuchi osisi. Anatara m usoro m ngwa ngwa na-esite na China. M na-atụ anya na-etinye a nnukwu iji n'ọdịnihu dị nso mgbe m nwere ike imeli MOQ nke 1,000 nkeji.
▶ Ezi kandụl beeswax dị mma. Jiri nlezianya kwakọba ma nyefee ya n'oge. Ọrụ dị ngwa na omume enyi. Nwere ike ịtụ ọzọ.
The lids ndị kpọmkwem dị ka a kọwara na ọrụ dị ukwuu. Enwere m afọ ojuju.
▶ mma mma osisi wicks na Burns ọma. Wendy Fu bụ ọkachamara na nnukwu iji kwurịta okwu. o ga enye gi ndumodu. ọnụahịa bụkwa eziokwu. Daalụ!
Lee foto ndị si n’ahịa anyị.
Post oge: Feb-07-2021